Solontena eny amin'ny CENI sy HCJ :: Miandry indray ny fifidianana ao amin’ ny Antenimieram-pirenena • AoRaha
Solontena eny amin’ny CENI sy HCJ Miandry indray ny fifidianana ao amin’ ny Antenimieram-pirenena
Nahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fifidianana ny solontenan’ny Antenimieram-pirenena ho eo amin’ny toeran’ny filoha lefitry ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI). Toy izany koa ny famindrana amin’ny fotoana hafa ny fifidianana ny solontenan’izy ireo ao amin’ny Vaomiera hisahana ny fanadihadiana mikasika an’ireo olom-panjakana manan-draharaha eo anivon’ny Fitsarana mpitondra ambony (HCJ). Niarahan’ireo olom-boafidy nanapaka tamin’ny alalan’ny tsangan-tanana teny amin’ny Ivon-toeram-pivoriana iraisam-pirenena (CCI) Ivato izany hevitra izany.
Tsy nisy ny fanazavana ofisialy avy amin’ireo mpikambana eo anivon’ny birao maharitra ao amin’ity andrimpanjakana ity mikasika ny antonantony nahatonga an’ireo fanapahan-kevitra ireo. « Satria zava-dehibe avokoa ireo fifidianana ireo ka mila dinihina lalina ny firosoana amin’izany », hoy fotsiny ny ankamaroan’ireo solombavambahoaka tonga teny Ivato, omaly.
Iraika ambin’ny folo ireto kandidà voatazona hiatrika ny fifidianana ny ho solontenan’ny Antenimierampirenena ao amin’ny Ceni. Nambaran’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine fa : « mbola misokatra io lisitra io mandra-pahatongan’ny fotoana hanaovana ny fifidianana manaraka indray ».
Re tsilian-tsofina kosa ny tsy nitovian’ny tadindokanga teo amin’ireo samy solombavambahoaka mikasika ny fisafidianana kandidà tokana hisolo tena azy ireo ao amin’ny Ceni, hatramin’ny omaly, ka tombanana ho isan’ny antony nanemorana ny fifidianana. Nanahirana ihany koa ny fitadiavana marimaritra iraisana momba an’ireo depiote handrafitra an’ilay vaomiera manokana hisahana ny fankatoavana na tsia ny antontan-taratasy fanenjehana an’ireo mpitondra ambony ka halefa hotsarain’ny HCJ.
Lalàna momba ny kolikoly Lavin’ny PAC ny fanitsiana nataon’ ireo solombavambahoaka
Fodiamandry olom-boafidy Voalevina haingana teny Anjanahary ny depioten’i Morombe
Fifehezana ny krizy ara-tsosialy :: Manao antso fanairana ny fanjakana ny FFM
Fampiasana tambavy :: Nanafatra CVO fanindroany i Tchad